Indlela yokuphelisa umoya ombi?
I-Lollipops, ukuhlafuna i-gum ... Musa ukuzama ukuthatha umoya obi - kubalulekile ukufumana isizathu. Ngokukhawuleza kwaye ukhangele lula ukuphefumula kwakho ngendlela elandelayo: thabatha ipotton uze utyhoboze amaxesha ama-2-3 kwisiseko solwimi. Lindela imizuzwana engama-45 kunye novumba. Yenza loo nto yokuzixilonga ngokukhawuleza emva kokuvuswa, ngokungqongqo kwisisu esingenanto, kwaye uya kufunda indlela yokuphefumula.
Ukuphazamiseka ngokugqithiseleyo ngobomi, ivelisa ezininzi iingxaki. Iphunga elimnandi emlonyeni ngumqondiso we-alamu othi into ephosakeleyo emzimbeni.
Isizathu sokuphefumula okuphefumulayo, qala ukukhangela udokotela wamazinyo ngesheke somlomo. Kwi-90% yamatyala, iphunga elisuka emlonyeni lihambelana nesifo se-gum, iifoyi zamazinyo ezipokothini zangaphandle kunye ne-caries. I-10% eseleyo yephunga elimnandi libangelwa ezinye izifo, ekufuneka ziqwalaselwe ngokuthe ngqo.
Ukuba amazinyo alungile, uye kwi-gastroenterologist. Izifo ezininzi zesisu zihamba kunye nefuthe elithile, ngoko kufuneka uqwalasele indlela yokuphefumula.
Okulandelayo kumgca ngumcebisi-ENT. Ukukrazula ingxaki kuza kunceda u-physiotherapy, uhlambulule, uhlambulule impumlo kunye ne-inhalation. Kunzima ukuphilisa izintso kunye ne-endocrine pathologies.
Ngendlela, impumlo ingaba ukuxilonga kakuhle kwaye iphakamise ukuba lixesha lokuba ubone ugqirha. I-Acetone douche - malunga nokuphulwa kwe-ushukela wegazi (jonga ngokukhawuleza kwisifo sikashukela!).
Kuyaziwa ukuba yiyiphi "imber" emlonyeni eyenzekayo xa sisitya i-anyanisi esitsha okanye igalikhi. Uya kumangaliswa, kodwa emva kokutya, ukufumana igazi kwiimiphunga, banika umoya ukuphefumula okungahambi kakuhle kwiintsuku ezimbini!
Ngoko ke, ukulungiselela intlanganiso ebalulekileyo, mamela kakhulu ukukhethwa kokutya. Cinga ngezinto ongafunangayo, ukuhogela - kwaye uzame ukuphepha ezi zinto.
Iyeza lemveli licebisa ukuba liqale njalo ekuseni kunye neHercules e-porridge emanzini. I-Oatmeal inceda ukwandisa inani lemali elifihliweyo, liphucula ukugaya, kwaye lisebenza kwii-microbes ezifana nomhlaza. Ubungcono umsebenzi wesisu - umoya omncinci. Kwaye ukuze ungabacaphukisi abanye emva kokuba utshaye ugwayi okanye umthendeleko wokuxhalaba, uncike kwiipulo.
Ucoceko uze ususe ngamacube
Iphunga elimnandi - halitosis - alizuli ilifa, kwaye ngoko, ukutshintsha imeko yethu ngamandla. Ukwenza oku, kubalulekile ukugcina ucoceko!
Ngentsasa, hlambulula ulwimi ngolwimi olukhethiweyo (okanye i-spoon ejwayelekile).
Ukuba kunokwenzeka, gubungela amazinyo emva kwesidlo ngasinye.
Gcoba umlomo kunye ne-decoction herbs ngefuthe lokususa (i-chamomile, i-wise, calendula, i-mint).
Ukucocwa ngokucokisekileyo kweendawo zokungcebeleka, sebenzisa i floss (floss).
Ukuqinisekisa ukuba umoya omoya ungaphazamisi ubudlelwane nabantu abakuzungezile, soloko udla i-gum okanye i-mint candy emva kokutya. Zama ukuba ungasondeli nakubantu, umzekelo, ukuba ungathethi into ethile endlebeni yazo. Kodwa oku akuthethi ukuba ufanele ugweme abantu abakufutshane nawe. Jonga nje ukuziphatha kwakho nabantu.
Nangona kunjalo, ingxaki yevumba elimnandi elivela emlonyeni womlomo likhulu nakakhulu kwimvelo. Ngoko ke, ukuze ufumene ngokwenene imbangela yokukhathazeka kwakho malunga nale ngxaki, kufuneka uqhagamshelane neengcali ezikhokelayo. Ugqirha uya kuba nako ukunquma ukuba yonke into ilungile nawe, kwaye yintoni eyabangela uxhalaba lwakho.
Into ephambili kukuba ukwamkela ugqirha akufanele ukuba ube neentloni kwaye ukhathazeke malunga nangaphandle. Ugqirha uya kuba nako ukufumana isizathu sokuza kwakho kuye kuphela xa unokuhlaziya uze uchaze yonke into ngokufanelekileyo. Ngenxa yoko, hla nganisa, ungakhathazeki, uhlalise uze uqiniseke ngokwakho. Ungesabi, kuba ugqirha ungumncedisi wakho kunye nomlingani, ongenakukwazi ukufumana kuphela isizathu sokugula kwakho, kodwa uyayisombulula.
I-Feng Shui kunye noMnyaka we-Patron we-Tiger
Ngaba ube ngumama? Gwema ukwenza amaphutha!
Xa iwashi liguqulelwa ngexesha lobusika ngo-2016 eRashiya nase-Ukraine
Ukutshintshiselana kwindlu yokuhlala kwidolophana
Yintoni endiyibhiyozele ngayo uNyaka omtsha?
Indlela yokwenza izinto ngokulandelelana kwikhompiyutha
Khetha i-perfume kumntu
Impawu zokuqala zokukhulelwa
Isondo sokuqala, iingxaki ezinokwenzeka
Malunga ne-PMS afunyanwe
Imfundo yokutya okunempilo
U-Pavel Priluchny waseMeja uphinde waqeqeshwa eMafiosi
Shish kebab isobho
Ukondla umama onesiko
Izakhiwo zokwelapha ze-currant emnyama
Intlanganiso yabazali: indlela yokunceda abazali bavelise umntwana ophilileyo ngokwengqondo
Abacebisi be-almond kunye ne-honey sauce
Indlela yokwenza i-manicure ekhaya
I-Sequins negolide ekuqokelelweni kwe-Dior Splendor Holiday 2016-2017
Yintoni endiyithethayo ebhedini?
Ngayiphi inyanga ekhaya ukupompa i-press?
Ngaba ndifuna ukwenza izitofu zokukhusela abantwana?
I Star Star Ikhula
Ukupheka kwe-shampoo efanelekileyo yekhaya kwizinwele ezomileyo kunye neengcebiso